Bible Mu Nsɛm Efi Babilon Nnommumfa so Besi Yerusalem Afasu a Wɔsan Toe So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
Bere a wɔwɔ nnommumfa mu wɔ Babilon no, wɔsɔɔ Israelfo gyidi hwɛe pii. Wɔtow Sadrak, Mesak ne Abednego guu fononoo a ogya redɛw mu mu, nanso Onyankopɔn gyee wɔn fii mu. Akyiri yi, bere a Mediafo ne Persiafo tuu Babilon gui no, wɔtow Daniel kyenee gyata amoa mu, na Onyankopɔn bɔɔ ɔno nso ho ban denam agyata no ano a omuamuae no so.
Akyiri yi, Persia hene Kores gyaa Israelfo no. Wɔsan kɔɔ wɔn kurom mfe 70 akyi pɛpɛɛpɛ fi bere a wɔde wɔn kɔɔ Babilon sɛ nnommum no. Nneɛma a edi kan a wɔyɛe bere a wɔsan baa Yerusalem no mu biako ne sɛ wɔbɛsan asi Yehowa asɔrefi no. Nanso, ankyɛ na atamfo siw wɔn adwuma no ano. Enti wɔsan baa Yerusalem no akyi bɛyɛ mfe 22 na wowiee asɔredan no si.
Afei, yɛte sɛnea Esra san tuu kwan baa Yerusalem sɛ obesiesie asɔrefi hɔ ho asɛm. Eyi yɛ bɛyɛ mfe 47 fi bere a wowiee asɔredan no si no akyi. Na, ɔkwan a Esra tui no akyi mfe 13 no, Nehemia boa ma wɔsan too Yerusalem afasu a na abubu no. Ɔfã a ɛto so ANUM no ka mfe 152 mu abakɔsɛm de bedu saa bere yi.